IZiko loMbono leWal-Mart: IiNkonzo, iiMveliso, iiNzuzo kunye neeNzuzo
Ixesha lokuposa: Aug-19-2021
Sibandakanya iimveliso esicinga ukuba ziluncedo kubafundi. Ukuba uthenga ikhonkco kweli phepha, sinokufumana ikhomishini encinci. Le yinkqubo yethu. Thenga iiglasi ezintsha kwintengiso? Xa ukhangela iiglasi ezintsha, zibonakala ngathi zikho kuyo yonke indawo. Usenokuba uqaphele ukuba i-W ...Funda ngokugqithisileyo »
Umgangatho olungileyo weTshayina ogqityiweyo / 1.56 / Umbono omnye / iPhotogrey / i-Optical Lens
UGiovanni F. Akola, uFranco Cardini, uDomenico Del Niro, uGiordano Bruno Gehry, uGennaro Margiri, uGennaro San Giuliano, uMirella Seri, uMarcelo Veneziani. UDa Fidel Castro nguCharlie Sheen waseJulio Iglesias, isitifiketi esinqwenelekayo se-ore a soddisfare, letteralmente, migliaia di donne giovani o meno gio ...Funda ngokugqithisileyo »
Ukukhula kukaTesla ayisiyongqondo: Amandla ayo eSicwangciso-qhinga abonisa uVavanyo oluPhezulu kakhulu ngo-2025 (NASDAQ: TSLA)
Ungayikhetha ngokukhawuleza njani i-lens ye-lens eqhubekayo?
Ukufakwa kweelensi eziqhubela phambili bekusoloko kungumba oshushu kwishishini le-optometry. Isizathu sokuba iilensi eziqhubela phambili zahlukile kwilensi yokukhanya enye kukuba isibini seelensi ezinenkqubela ezinokusombulula ingxaki yabantu abadala zinokubona ngokucacileyo ukusuka kude, phakathi kunye nakufuphi, ezilungele kakhulu ...Funda ngokugqithisileyo »
Ayisiyiyo le lens ye-photochromic grey kuphela, kodwa nazo ezi ??
Iilensi eziguqula imibala, ezikwabizwa ngokuba ziilensi "ezinemifanekiso". Ngenxa yokuba into yemichiza yesilivere yesilayidi yongezwa kwilensi, iilensi zokuqala ezingafihliyo kunye ezingenambala ziya kuba ilensi enemibala xa ivezwe kukukhanya okuqinileyo ukukhusela, ke kufanelekile ...Funda ngokugqithisileyo »
Kutheni le nto ukutshintsha umbala / i-photochromic myopia lens ingatshintsha umbala
Njengokuvela rhoqo kwe-myopic, zonke iintlobo zegilasi ze-myopic zivela ngokungapheliyo, ke umbala uzitshintshe njani iiglasi ze-myopic zaba yingxaki ekhathalelwa ngumntu wonke. Ngenxa yokuba iiglasi ze-myopia ezilahlekileyo zikhangeleka zilungile, yiyo loo nto lukhetho lwezigulana ezininzi ezingaphantsi kwe-myopia ...Funda ngokugqithisileyo »
Le yimpendulo yenkokeli ephikisayo kuhlahlo-lwabiwo mali | Iindaba zaseKhaya
Inkokeli yeqela eliphikisayo u-Kamla Persad-Bissessar namhlanje ukhuphe impendulo yeqela eliphikisayo kuhlahlo-lwabiwo mali lwangoMvulo olungeniswe ngu-Mphathiswa Wezemali u-Colm Imbert. Enkosi, Somlomo, kwaye ndiyayibulela le nkundla ngethuba endilifumeneyo lokufaka isandla kule ngxoxo-mpikiswano ngengxelo karhulumente yesine. Ndiyathemba ukuba e ...Funda ngokugqithisileyo »
Izimvo zikaZenni: Ngubani othe "hayi" kwisibini seeglasi ezi- $ 7?
Ndichithe phantse i-600 yeedola kwisibini sokugqibela seiglasi kunye neelensi-ezazisemva kokuba i-inshurensi yombono iqale ukusebenza. Ibali lam aliqhelekanga. Xa uthenga kwiityathanga zamehlo, ii-boutique zoyilo okanye oogqirha bamehlo, ukunyuka kwamaxabiso kuninzi lwegama leglasi kunye neelensi zokumisela zihlala ...Funda ngokugqithisileyo »
Kutheni ndingakucebisa ukuba ukhethe iilensi ze-photochromic?
1, injongo-ezimbini, thintela inkathazo yokuthatha kunye nokunxiba iMyopia ngenqanaba lokujonga iso, ehlotyeni xa kukho i-sunscreen engagungqiyo, enjenge-sunscreen yokuba unezibuko zelanga, kodwa ngaphandle kokuba unxibe iilensi zonxibelelwano kunye nezibuko zelanga, kungenjalo aziboni kakuhle; Kwaye ...Funda ngokugqithisileyo »
Wazi ntoni malunga ne "lens ze-photochromic"?
Ihlobo ligqatsa ubushushu, lilungiselela iholide encinci encinci ukuphuma nabahlobo ukuze baphumelele ukonwabela ukukhanya kwelanga. Kodwa kubahlobo abanxibe iiglasi, kodwa amehlo e-photophobia, abanakulandela intliziyo yokunxiba iiglasi zelanga okanye kufuneka banxibe iiglasi ezimbini zoxinzelelo. Yabona ...Funda ngokugqithisileyo »
Uyikhetha njani iilensi ezichanekileyo zeelensi zeglasi?
1, Khetha njani? Xa uthelekisa iiglasi, xa ufikile ukukhetha ikhonkco leLensi, ngaba iiglasi zeglasi azilahlekanga? Awazi ukuba ungayikhetha njani ilensi. Nantsi indlela yokukhetha ilensi efanelekileyo kwinqanaba lakho. Isalathiso sokuphinda ubonakalise isalathiso sokuphindaphindwa ...Funda ngokugqithisileyo »
Ukutyhila izixhobo zeelensi zeglasi
Ubungakanani belensi kwiiglasi buchatshazelwa zizinto ezininzi, phakathi kwawo amandla e-lens yeyona nto iphambili. Ubunzima beLens ye-Myopia ePhakamileyo butyebile kunobo beMyopia esezantsi. Nangona kunjalo, xa kufikwa kubukhulu obupheleleyo, ububanzi beLens bubalulekile, kwaye ukukhetha isakhelo esincinci kunokutyikitya ...Funda ngokugqithisileyo »
IZiko leMiboniso yeWal-Mart: IiNkonzo, iMveliso ...
Sibandakanya iimveliso esicinga ukuba ziluncedo kubafundi. Ukuba uthenga ikhonkco kweli phepha, sinokufumana ikhomishini encinci. Le yinkqubo yethu. Thenga iiglasi ezintsha kwintengiso? Xa ufuna entsha ...